> Magan galyo > Cutubyada kala duwan ee shaqada magan galyada
Shakhsi kasta oo (rag iyo dumar) suwiska usoo raadsada amba waydiista magan galyo, shakhsigaa oo kasoo baxsaday dhibaato soogaadhay amba kabaqanaya inay dhibaato soogaadho waxaa waajib amba khasab ku ah inuu arjigiisa dhigo mid kamid ah afarta xarumood ee diiwaangalinta iyo dacwadaha ee dawladda dhexe ee federaalka (dawladda sare), qaybta laajiyiinta loona yaqaanno : centre d’enregistrement et de procedure (CEP) de l’office fédéral des migrations (ODM).Xarumahaa oo kala ah : Bâle, Chiasso, Kreuzlingen, iyo Vallorbe.
Qaybaha amba marxaladaha kala duwan ee magan galyadoonku waxay kala yihiin sidan:
Arji dhigista iyo diwaangalinta xarumaha diwaangalinta ee magangalyo doonka.
Dhagaysiga iyo qorista arjiga amba dacwadda magangalya doonka.
Daraasad iyo baadhitaan lagu sameeyo arjiga amba dacwadda magangalya doonka iyo go’aan gaadhista.
Go’aanka laga gaadho arjiga amba dalabka magangalya doonka oo shakhsigu diidi karo haddii go’aanku noqdo diidmo, shakhsigaa oo samayn kara dacwad looyaqaanno ( recours ).
Magan galyo, bacda daraasadda iyo baadhitaanka dacwadda amba arjiga magangalya doonka , go’aanka oo noqda magangalyo loo ogolaado shakhsiga, inla diido oo waddanka awood lagaga bixiyo, amba shakhsigu iskii iskaga noqdo.
Hay’adaha gargaarka ee hoosyimaadda ururka suwiska ee caawiya qaxootiga, magaceedana layiraahdo (layidhaahdo) (OSAR) waxay udiraan goobjoogayaal hay’adahooga matalaya. Goobjoogayaashu waxay ilaaliyaan amba eegaan sida loowado hawsha lagu dhagaysanayo laguna qorayo dacwadda amba arjiga magangalya doonku intey socoto.
Hay’adaha gargaarka iyo ururrada kashaqeeya hawlaha laajiyiinta iyo shakhsiyo mutadawaciin ah ayaa wadajir umaamula xafiisyada qareennada amba xeeryaqaannada loo diyaariyey magangalya doonka iyo inay usameeyaan qaxootiga hawlo (camallo) amba udiyaariyaan barnaamijyo usahla laqabsashada suwiska (si ay ula qabsadaan nolosha suwiska dadka qaxootiga ahi).
In this section: Waydiisiga magangalyada, Go’aan, Racfaan samayn, Gargaarka degdegga ah, Dhageysiga amma dhageyso
. warbixinta ugumuhiimsan ee hawlaha magangalya doonka oo lagu turjumay luuqadaha adduunka ugu waaweyn (ugu badan)
Liiska xafiisyada garyaqaannadu kudarsaan arjiyada amba codsiyada.
Liiska garyaqaannada iyo aqalka kaantoonka ee lagu darso arrimaha dadka usoo haajira ka.